MPANAO GAZETY NIHARAN’NY HERISETRA
Voaendaka teny amin’ny Fiantsonan’ny taksibe teny Andranomena i Rivo Thein Swhe, mpanao gazetin’ny Top Radio ny sabotsy teo tokony ho tamin’ny 8 ora alina.
Naratra ny tenany ary lasan’ireo olon-dratsy ny vola, ny finday, ny fitaovana fandraisam-peo (dictaphone), voandalana mba nentina ho an'ny vady aman-janaka, eny fa hatramin’ny fitafiana teny an-kodiny aza tsy namelan’ireo olon-dratsy. Tsy mbola tomombana tanteraka ny toe-pahasalamany ankehitriny.. Tsy milamina ny tanàna ary tsy an-tanàn-dehibe, tsy an-drenivohitra. Tsy andro tsy alina fa dia mirongatra ny asan-jiolahy sy ny fanendahana.
Nahavalalanina ny maro sy vao mainka nampitombo ny fanakianana nahazo an’i Andry Rajoelina ny fanambarana nataony tany Frantsa momba ny hanavotany an’i Madagasikara, hono. Eto ny tanindrazany, saingy naleony tany an-toerana no nanao fanambarana. Ekena fa mety hisy ny fanenjehana ataon’ny HVM, saingy midika izany fa tsy sahy sedra sy matahotra Rajoelina. Mbola aiza ho aiza izany rehefa tena fifidianana, raha hirotsaka izy. Toa manamafy hatrany fa tsy tena sahy hirotsaka ho filoha ny tenany.
NIPOITRA NY AO AN-DAMOSINY
Nazava ny fanambaran'ilay coordonnateur Gérard Perceau, fa izy sy ireo vahiny mpiara-dia aminy no handrindra ny tetika rehetra rehefa tonga eto Madagasikara momba ilay tetikasa IEM (Initiative Emmergence Madagascar) nambaran’i Andry Rajoelina tany Paris ny faran’ny herinandro teo fa hanavotana an’i Madagasikara. Ry David Douillet mpiangaly judo sy efa minisitry ny fantanjahantena fony andron'ny Filoha Nicolas Sarkozy no Ray mpiahy an'i Andry Rajoelina mikasika ity hetsika ity. David Douillet izay manana raharaha eny amin' ny fitsarana noho ny hosoka momba ny fanambaram-panana nataony.
Ny vahoaka malagasy mihitsy no mahatonga ny firenena tsy mandroso noho ny hakamoana sy ny tsy fankatoavana ireo raiamandreny mpitondra amin’izao fotoana, hoy ny mpamakafaka ara-politika sy mpanohana ny fitondrana, Harifidy Ramanandraibe. Efa manomboka hita taratra ny fisandratana mirindra tao anaty ny efa-taona ka tsy tokony hotsikeraina fa havela hanohy ny asany ny filoha. Tsy midika ny hijanona eo amin’ny fitondrana hatramin’ny 2030 ihany koa ny fananana vina, hoy ity mpamakafaka politika fatra-piaro ny Hvm ity.
Fanadiovan-tena fotsiny ny ataon’ny filoham-pirenena tamin’ny fanehoany ny fisandratana mirindra, hoy ny filohan’ny Vondron’olon-tsotra Zoé Sarah. Vahaolana maika, ho an’ny fijaliana izay iainan’ny vahoaka amin’izao no andrasan’ny vahoaka fa tsy ny kobaka am-bava tsy fantatra na ho tanteraka na tsia. Miantso ny vahoaka hitsangana sy hitaky ny rariny ihany koa ny VOT satria efa tsy rariny intsony ny zava-mitranga ankehitriny.
Mety amin’ny firenena malagasy mihitsy ny fananan’ny filoham-pirenena ny vina entina hanarenana an’ i Madagasikara, hoy ny filoha lefitry ny oniversiten’i Fianarantsoa. Mila mijery ny tena fampandrosoana eny ifotony anefa ny fitondram-panjakana sy mampihatra ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Vao mainka hanatsara ny firenena raha toa ka samy mampiseho ny vina tiany hampandroso an’i Madagasikara ireo filoha teo aloha
Tsy tia miara-miasa amin’ireo antoko politika hafa sy ireo nanolo-tanana azy ny filoham-pirenena, hoy i Mamy Patrick Andrianjanaharison, mpamakafaka ara-politika. Antony mahatonga ny tsy mbola fampandrosoana ny tsy fahaizana mihaino ny sosokevitr’ireo olona hafa raha ny nambarany. Mila avoaka haingana ihany koa ny datim-pifidianana mba hanalana ny ahiahin’ny rehetra ny amin’ny mety tsy hisian’ny fifidianana amin’ity taona ity.
BEN’NY TANANA NIGADRA
Nidoboka am-ponja vonjimaika ny lefitry ny ben’ny tanànan’i Malaimbady. Izany dia taorian’ny raharaha fakàna an-keriny izay nitranga tao Morondava. Raha tsiahivina, niaro fanolanana koa ity raharaha ity. Etsy andaniny, nandefasana zandary maromaro nidina any an-toerana mba hampandry tany ny tanàna. Misy mamoy ankehitriny ny hoe misy adilahy politika izay mitranga ao an-toerana ary mifampiantsy ireo olom-boafidy any amin’iny faritra iny.
Tsy afaka miditra ao amin’ny tranon’ny minisiteran’ny fampianarana ambaratonga voalohany intsony ny mpikambana sasantsasan’ny sendikan’ny mpampianatra (SECES). Amin’izy ireo dia miendrika fanambaniana sy fanompana izany satria miasa eo anivon’io minisitera io izy ireo ary matoa mijoro amin’ny tolona sendikaly dia noho ny fikarohana fanatsarana ny fampianarana eto Madagasikara.
LOZA – BY PASS
Fahoriana in-droa miantoana no nianjady tamin’ny fianakaviana iray. Voalohany, nisy nandona tamin’ny fiara teny amin’ny By-pass ny raim-pianakaviana izay maty tsy tra-drano. Nitsoaka ilay fiara ary hatreto dia tsy fantatra ny mpamily izay nahavanon-doza. Manarak’izay, rehefa tonga indray ny andro fandevenana dia mbola nisy namaky koa ny trano ary foana tsy nisy entana intsony tao amin’ny tranon’ny maty.
Dahalo miisa 6 mitondra FC 2 nangalatra ny omby miisa 7 an’ny mponina antsoina hoe Razaiarisoa Georgine, monina ao Ambatovinaky, kaominin’ambanivohitra Bekapaiky ny 25 janoary 2018 tamin’ny 10 ora sy 30 minitra alina. Nanara-dia ny zandary avy ao amin’ny PF Bekapaiky sy ny fokonolona. Nisy ny fifandonana teo amin’ny zandary sy ireo dahalo tao Andranomangatsa ka tafaverina any amin’ny tompony ny omby rehetra ka tsy nisy ny naratra na ny aina nafoy.
Nisy nampandre ny zandary tao amin’ny Borigady Ikongo tamin’ny 24 janoary taminy 4 ora folakandro fa nisy olona atao hoe Velotia maty an-drano tao amin’ny renirano Andranata fokontanin’i Tsivoha noho ny fivadihan’ny lakana niampitany. Natolotra ny fianakaviany ny razana taorian’ny fitsirihana nataon’ny zandary sy ny dokotera.
Nampandre ny zandary tao amin’ny Borigady Masomeloka ny sefom-pokontany Lemaka ny 25 janoary 2018 tamin’ny 5 ora sy 30mn hariva fa misy faty hita ao Marohasy, dia izany Zaravelo teraka ny 20 aprily 1968 tao Lemaka izany, zanak’i Ratody sy JAcqueline. Nahitana dian’antsy ny vatany ka ny Borigady Masomeloka sy ny Medecin chef Masomeloka no nanao ny fitsirihana sy ny fizahana ifotony.